क्यूबिक जिरोकोनिया र हीरा तुलना गर्नुहोस्
क्यूबिक जिरकोनिया वा CZ जिरकोनियम डाइअक्साइडको क्रिस्टलीय मैन्युअड फारम हो, ZnO2। जिरोकोनियम डाइअक्साइड पनि जिरकोन्याको रूपमा चिनिन्छ। सामान्यतया, जिरकोनियाले मोनोक्लिनिक क्रिस्टलको निर्माण गर्नेछ। एक स्थिरता (यट्रियम ओक्साइड वा क्यालिसियम ओक्साइड) जिरोकोनले क्यूबिक क्रिस्टल बनाउनको लागि थपिएको छ, यसैले नाम क्युबिक जिरकोनिया ।
क्यूबिक जिरोकोनियाको गुण
CZ को ओप्टिकल र अन्य गुण निर्माता निर्माता द्वारा प्रयोग गरिएको नुस्खा मा निर्भर गर्दछ, यसैले क्युबिक जिरोकोनिया पत्थरों को बीच केहि भिन्नता छ।
क्यूबिक जिरोन्कोयाले सामान्यतया पहेंलो हरियो पराबैंगनी लाइट अन्तर्गत सुनको पहेंलो हरियाली पुर्याउँछ।
क्यूबिक जिरोकोनिया बनाम हीरा
सामान्यमा, CZ एक हीरा भन्दा बढि आगो देखाउँदछ किनकी यसको उच्च फैलावट छ। यद्यपि, यसमा योरा (2.417) भन्दा बढी प्रशोधन (2.176) को कम सूचकांक छ। क्युबिक जिरकोनिया सजिलै हिरासत बाट छुट्याइएको छ किनकी पत्थरहरू अनिवार्य रूप देखि निर्दोष छन्, कम कठोरता (8 मा मोक्स स्केलमा 10 को तुलनामा हीरे को तुलनामा), र सीजे लगभग 1.7 घडी भन्दा बढी घने हो। यसको अतिरिक्त, क्यूबिक जिरकोनिया एक थर्मल इन्सुलेटर हो, जबकि हीरे एक अत्यंत कुशल थर्मल कंडक्टर हो।
रंगीन क्यूबिक जिरोकोनिया
सामान्यतया स्पष्ट क्रिस्टल दुर्लभ पृथ्वीको साथ रंगीन ढुङ्गाहरू उत्पादन गर्न डप गरिएको हुन सक्छ। सिरेमियमले पहेंलो, सुन्तला र रातो रत्न दिन्छ। क्रोमियमले हरी CZ उत्पादन गर्दछ। नेडेमियमले बैंगनी पत्थर बनाउँछ। एर्बियम गुलाबी CZ को लागि प्रयोग गरिन्छ। र सुनको पहेंलो ढुङ्गा बनाउन टाइटेनियम थपिएको छ।
क्यूबिक जिरोकोनिया र क्यूबिक जिरकोनियम बीचको फरक फरक फरक छ हीरा रसायन विज्ञान
लिभरमोरेमियम तथ्य - तत्व 116 वा Lv
सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा तत्व के हो?
तत्वहरूको सूची Lanthanides
"सान्टाको जवाफ" - क्रिसमस-थेमेड हास्यडिक पुरुष मोनोलोग
शब्द "एपरसेयर" कन्जुगेट कसरी गर्ने
कसरी संरेखण र रियलआउट गर्ने कार्यहरू छाप प्रभावहरूको भाग हुन्
रातो टाउको: सबैभन्दा छोटो कोर्स
होलोकस्टको शब्दहरू जान्नका लागि सर्तहरू
क्यासेट रजिस्टर के हो?
के तपाईंको खाद्य उत्पादनहरू खतरनाक जडहरू छन्?
9 उत्कृष्ट टिभी कार्टहरू फिचर चलचित्रहरूमा घुमाइएको
इतिहासको लघु गोल्फ
परिवार को Braconidae को ब्रशकोनिस्सप्स को बारे मा सबै
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड - ब्रेकिंग खराब
प्लाज्मा बल र फ्लोरोसेंट लाइट प्रयोग
इटालियन Verb Conjugations: Nuotare
फुटबल शब्दशःको बारेमा - अग्रेषित प्रगति
हिस्टिया, ग्रीक देवीको देवी
के मेरो क्लासिक कार को पुनर्स्थापना छ
गोली प्रहार रोटिकल टेक्निक
सर्वश्रेष्ठ काटाटोनिया एल्बमहरू
राम्रो प्रोप शेफ्ट सील
ओलिवर गोल्डमith द्वारा नेशनल प्रेडूड्स मा